Vision6: Otu ọnụ, Customizable, Enterprise Marketing akpaaka Ngwọta | Martech Zone
'Slọ ọrụ na-ere ahịa email kasị ukwuu n'Australia na-amụba ugbu a na United States, na-enye ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa ahịa ahịa nke a na-ahụkarị, na ọnụ ahịa dị ọnụ ala. Vision6 bu ihe ntinye ihe omuma ahia di iche iche nke emere maka ndi ahia na ulo oru. Vision6 integrates email akpaaka, SMS, iche na-elekọta mmadụ media na mfe iji interface.
Ọtụtụ puku ụlọ ọrụ dijitalụ gụnyere Clemenger BBDO Australia, yana ndi otu ahia ahia n’ime ulo oru tinyere Audi Sydney, BMW Brisbane, Royal Society for Prevention of Cruelty of Animals (RSPCA) na otutu ngalaba gọọmentị, dabere na Vision6 iji lekwasịrị ndị na-ege ha ntị anya nke ọma, ozi ịntanetị nkewa nke ndị ahịa kpatara.
Email Marketing nwere ROI kachasị elu nke ọwa ahịa ọ bụla dijitalụ, ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ dị elu na-achọ usoro dị mfe, ma dị ọnụ ala. Nke a emeela ka ahịa US bụrụ otu n'ime asọmpi kachasị maka ndị na-eweta azịza ahịa, ọkachasị n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Obi dị anyị ụtọ iweta otu n'ime nghọta kachasị emetụta, onye ọrụ metụtara onye ọrụ dị na ahịa US. Mathew Myers, onye isi nke Vision6
Vision6 Marketing akpaaka Atụmatụ
Advanced Email akpaaka - Turbo na-elekọta ndị ọgbọ gị site na ịtọlite ​​mkpọsa email nke ezubere iji tọghata ndị na-akwụ ụgwọ. Mepụta workflow nke akpaghị aka ahaziri ozi ịntanetị.
Dọrọ na dobe Editor - Mepụta ma dezie ozi ịntanetị na-ele anya ọkachamara na ntanetị dị mfe, dọrọ na dobe. Ọ bụ usoro nrụgide na-enweghị nrụgide iji dezie ndebiri.
Temkpụrụ enyi na-eji agagharị agagharị - Họrọ ihe eji eme HTML nke eji arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ ọ bụla.
Ọdịnaya Dynamic - Melite nsonaazụ email gị site na ịhazi ọdịnaya email gị nke na-eme ka njirimara data gị dịkwuo mma. Ihe nlere nke akwukwo nke Vision6 na eme ka nkewa data buru ikuku.
Ule email - Kwadoro site na Litmus, nwalee ma lelee email gị karịa igbe mbata 45 ma zuo ike nfe, ịmara na ọ ga-adị mma.
Fọm Weebụ - Tinye ụdị na ebe nrụọrụ weebụ gị na mgbasa ozi mmekọrịta ma malite ịnakọta ụzọ. Mepụta ngwa weebụ dị iche iche dabara na akara ngosi gị. Onye editọ Vision6 na-eme ka ọ dị mfe itinye ihe oyiyi ma hazie ụdị iji kwekọọ na mkpa gị.
Mmekọrịta - Mfe gbanwere ọrụ site na njikọta. Jikọọ ahịa email gị na ọtụtụ narị ngwa gụnyere Google Analytics, WordPress na Facebook.
Mkparịta ụka mmekọrịta na pịa Maps - Anya na zuru ezu akụkọ na-enye bara uru ịghọta gị ndị debanyere aha omume. Lelee nsonaazụ mgbasa ozi email gị na-egosipụta ndụ ma hụ onye na-agụ ozi ịntanetị gị na desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaaka.
Banye na Free na Vision6
Tags: dọrọ na dobe editọ emailemail di omimi di omiminyocha emailFacebookGoogle Analyticslitmusakụrụngwa ahịaọhụụ 6WordPress